🥇 ▷ Asalka YouTube-ka ayaa lahaan doona taxane taageeran lacag la'aan ah ✅
Halkii aad ka bixin lahayd rukumada, miyaad doorbidaysaa xayeysiiska si aad u hesho marinka taxanaha asalka ah? Taasi waa waxa ay YouTube soo bandhigi doonto: bisha Sebtember, oo ah qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira Asalka YouTube mar dambe ma noqon doono mid gaar u ah adeegsadayaasha bixiya qarashka helitaanka qaddar-dhimista
O YouTube wuxuu horey u sawiray, bishii Maajo, suurta galnimada siideynta wax soosaarka asalka ah ee YouTube-ka ee loogu tala galay dhammaan isticmaaleyaasha, oo ay ku jiraan kuwa aan lacagta bixin. Taageero la’aan, Google ayaa dhowaan cusbooneysiiyay bogagga caawinta aaladda si loo muujiyo in fikradda horay loo sii wadi doono.
Laga bilaabo Sebtember 24, 2019, waxbadan oo ka kooban waxyaalaha asalka ah ee YouTube-ka waa la gali karaa iyadoon loo baahnayn rukhsad bixin. Laakiin taasi micnaheedu maahan in akoonnada ‘Premium’ ee YouTube aysan mar dambe faa’iido yeelan doonin.
Gaaritaanka isticmaaleyaasha aan bixin ayaa lahaan doonta xadidan. Waxay ku bilaabmaysaa soo bandhigida xayeysiiska dhammaan marxaladaha, sidii horeba loo caddeeyay. Kuwa leh akoon ‘Premium’ ma arki doonaan xayeysiin. Intaa waxaa sii dheer, fiidiyowyada leh noocyo agaasime iyo masraxyo dheeri ah, tusaale ahaan, waxay sii wadayaan in loo sii daayo oo keliya dadka lacagta siiya
Inbadan Kaliya isticmaaleyaasha Youtube Premium ayaa soo degsan kara waxyaabaha ku jira YouTube Asalnimada ee dib u soo laaban khadka tooska ah iyo si dhakhso leh marinnada cusub.
Waxay u badan tahay caqabadda ugu weyn inay tahay tan: dhowr wax soo saar oo ah Asalka YouTube-ka ayaa sii wadi doona in lagu xaddido xisaabaadka Premium. Waxay u muuqataa in xaaladdani ay si toos ah u khusaynayso waxyaabaha laga soo diyaariyey madal ka hor Sebtember 24.
Qayb ka mid ah aruurinta gaarka ah waa la siidayn karaa gebi ahaanba ama qayb ahaan dadka isticmaala ee aan bixin, laakiin wakhti xadidan oo si cad ula socda adeegga xayeysiinta.
O YouTube wuxuu kaloo ka digayaa in jiritaanka filimada, bandhigyada iyo dhacdooyinka masraxa ay ku kala duwanaan karaan waddan ama gobol.
Dalka Baraasiil, YouTube-ka ayaa ku kacaya $ R $ 20.90 bishiiba koontada shaqsiga ama R $ 31.90 qorshaha qoyska (illaa shan qof).